Golaha Imaamyada Waqooyiga Maraykanka oo lacag deeq ah ku wareejiyey hay’adaha HARO iyo READ | Majliska.org
Golaha Imaamyada ee Waqooyiga Maraykanka oo lacag deeq ah ku Wareejiyey Hay’ahada (HARO & RED) si loo gaarsiiyo dadkii ku waxyeeloobay Duufaanihii Kadhacay Gobalada Puntland
Xaflad si wanaagsan loo soo agaasamay ayaa xalay lagu qabtay masaajidka wayn ee Abubakar As sadiiq, ee Magaalada Minneapolis. Xafladaas oo ay soo qaban qaabiyeen Golaha Iimaamyada &Masjid Abu-bakar. Xafladaas oo Goluhu ku wareejinayay Tabarucaadkii ay u sameeyeen Walaalahood ay ku habsatay dhibaatadii waynayd ee ka
dhacday gobalka bari. Xafladaas ayaa Waxaa lagu gudoonsiiyay Hayadaha kala ah HARO IYO READ Lacag cadadkeedu yahay &80,000 Lacagtaas oo ay gaarsiinayaan hayadahaas dhibanayaasha.
Xaflada Ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo, odayaal iyo Marti sharaf faro badan, Waxaana halkaa hadalo wax ku ool ah ka jeediyay, Gudoomiyaha Guud Ee Golaha Isutaga Masajida Ee W/Maraykanka Sheikh Abdirahman Sh. Cumar, Lacagtana Gudoonsiyey Hayadahaas.
Sidoo kale Waxaa isna Goobta ka hadlay Gudoomiyaha Gudiga Fulinta Ee Majliska Sheikh Abdullahi Abul-Fadli, sharax dheerna ka bixiyey hawshan baaxadeeda iyo siduu goluhu ugu istaagay, gurmadka walaalaha dhibku Gaaray iyo inay wali socoto hawsha gurmadka.
Sidoo kale Sheikh Abdirisaq Haashi oo ah Imamka masjid Abubakar ayaa hadalo kooban oo Mahad naq ah ka jeediyay Goobta, Waxaa kaloo isna hadalo soo dhawayn iyo warbixino isugu jirto jeediyay, Gudoomiyaha Masaajidka Abubakar Sh Abdirashiid Bare Muse.
Waxaa iyagana Goobta ka hadlay odayaasha Magaalada Minneapolis Una mahad celiyay, culimada iyo dadaalkay muujiyeen.
Ogu danbayntii ayaa waxaa goobta ka hadlay Sheikh Ali Haji oo matalayay HARO & Sheikh Bille Sugulle oo matalayay READ. oo iyagana balan qaaday inay gaarsiin doonaan Amaanadan Meeshii loogu talagay.
Xafiiska Dacwada iyo Iclaanka Ee Golaha Isutaga MasAajida